Faallo: Haraadigu yuusan kala harin! - Caasimada Online
Home Maqaalo Faallo: Haraadigu yuusan kala harin!
Faallo: Haraadigu yuusan kala harin!
Inay ka qaybqaateen dagaal sokeeye.
Inay ka qaybqaateen dagaal diimeed.
Inay qabyaaladiistayaal yihiin.
Inay yihiin qabqablayaal.
W/Q: Bashir M. Hersi
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qoraaga ku saxiixan, wax shaqo ahna kuma lahan tan Caasimada Online.